Xaflad Lagu Taageerayay Madaxweyne Dr.Xasan Sheekh Maxamuud
Munaasabad ballaaran oo lagu taageerayay Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu qabtay Hotelka City Palace ee magaalada Muqdisho, kaasoo ay ka qeyb galeen ilaa afar boqol ruux oo isugu jirtay marti sharaf kala duwan, sida Mas’uuliyiin xilal uga soo qabtay dowladda, Xildhibaano, Siyaasiyiin, Aqoonyahano, Culumaa’udiin, dhalinyaro, Odayaal dhaqameedyo iyo Haween.
Munaasabadan oo aheyd tii u horeysay nooceeda oo ka dhacda magaalada ayaa waxaa soo qaban qaabisay Hey’adda Wada hadalka Bulshada ee CCD, taasoo ay halku dhig uga dhigtay soo dhoweynta Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya iyo sidii loola shaqeyn lahaa.
Gudoomiyaha Hey’adda Wada hadalka Bulshada ee CCD Ciise Axmed Cumar ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh, isagoo tilmaamay in doorasho taariikhi ay aheyd muddo 42-sano kadib in Soomaaliya lagu doorto Madaxweyne Soomaaliyed.
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Prof. Cali Maxamed Geeddi ayaa sheegay in Soomaaliya ay cagta saartay Is bedel siyaasadeed, isagoo xusay muddo 45-sano ah.
“Inaan Xormeyno, inaan soo dhoweyno, oo aan taageerno Madaxweynaha cusub ee Soomaaliyed, waa is bedel siyaasadeed oo dalka ka dhacay muddo 45-sano ah, waa Madaxweynihii 3aad ee si dimoqraadi loogu doorta Caasimada Muqdisho sanadii 1967, Madaxweynihii hore C/rashiid Cali Sharmaarke ayaa halkan lagu doortay”ayuu yiri Ra’iisul Wasaarihii hore Prof, Cali Maxamed Geeddi.
“Waa u Hambalyeyneynaa, nuxurka wanaagsan ee Munaasabada waa soo dhoweyn, marxabeyn iyo taageero, waa cusub ayaa u baryay Soomaaliya, Dowladihii KMG waa laga gudbay, Dowlad Soomaaliyed oo Buslahdeeda u adeegeysa ayaa timid”ayuu yiri Prof. Cali Maxamed Geeddi oo ku ammaanay Hey’adda Wada hadalka Bulshada CCD sida ay u soo qaban qaabisay Munaasabadan.
Sidoo kale waxaa ka hadlay Munaasabada Madiino Caamir oo sheegtay in Haweenka la’aantood aanay Dowladda dhaqaaqi karin, isla markaana ay taageerayaan Madaxweynaha cusub hadii ay yihiin Haweenka Soomaaliyed.